उमेर बढ्दै गएपछि ‘सिंगल’ रहने चाहाना पनि बढ्छः एक अध्ययन! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
उमेर बढ्दै गएपछि ‘सिंगल’ रहने चाहाना पनि बढ्छः एक अध्ययन!
एजेन्सी – मा**निस सामाजिक प्राणी हो । सामाजिक प्राणी भएकै कारण समाजमा बाँच्नको लागि मानिसलाई साहाराको जरुरत पर्छ । जन्मसँगै जब बचपनका पाइलाहरु अगाडि बढ्न थाल्छन् तब देखि मानिसहरु साथी खोज्न थाल्छन् । बच्चादेखि नै एक अर्काका साथी बन्न सुरु गर्छन् त्यसपछि विस्तारै सबैभन्दा मिल्ने साथीको खोजीमा लाग्छन् र आफ्नो समय र उर्जा असल जीवनसाथीको खोजीमा लगाउँछन् ।सामाजिक परम्परा जगाइराख्न मात्र नभई हर कोहिलाई कसै न कसैको आवश्यकता पर्ने प्राकृतिक नियम नै हो । त्यसैले प्राकृतिक र सामाजिक परम्परालाई अस्वीकार गरेर एक्लै जीवन बिताउनु हरेकका लागि सम्भव हुदैँन ।
कस्तो हुन्छ ‘सिंगल’ मानिसको जीवन?
यस अध्य**यनले वैज्ञानिक कारण उल्लेख नगरेपनि अध्ययनमा उपलब्ध डाटाका अनुसार सिंगल व्यक्तिले जीवन सन्तुष्टिका साथ विताइरहेको पाइयो । एक्लै बस्नेहरुमा सहनशीलता बढ्दै जाने र आफूजस्तै एक्लै सफल भएका मानिसहरुलाई हेरेर आफूप्रति विश्वास जाग्ने भएकाले उनीहरुलाई जीवनमा एक्लो हुनुमा कुनै पनि अपसोस हुँदैन !
Previous पढ्नुहोस् अनी शेयर गर्नुहोस्! महान दार्शनीक प्लेटोका विशेषोपयोगी १८ भनाईहरु!
Next कस्ले बाजी मार्ला त पहिलो ‘कमेडी च्याम्पियन’?